चिसोका कारण स्वास्थ्यमा धेरै समस्या देखा पर्न सक्छन्, बच्ने उपाय के ? जान्नको लागी यहाँ क्लिक गर्नुहोस् - Nayapul Online
चिसोका कारण स्वास्थ्यमा धेरै समस्या देखा पर्न सक्छन्, बच्ने उपाय के ? जान्नको लागी यहाँ क्लिक गर्नुहोस्
प्रकाशित मिति : Tuesday, December 4, 2018 nayapulonline
मंसिर १८, चिसोमा स्वास नली खुम्चिनुका साथै कफको उतपादन बढ्ने गर्छ । यसबाहेक, यस मौसममा धुवाँ र वातावरणमा मिसिएका तत्व माथि पुग्न नसकेर वायुमै तैरिने गर्छ ।परिणामस्वरुप, चिसोमा आस्थमाको समस्या बढ्ने गर्छ । त्यसैले, आस्थमा रोगीहरुले चिसोमा निम्न लिखित कुरामा विशेष सावधानी अपनाउनु पर्छ ।
आस्थमा रोगीहरुले बाहिरबाट घर आउँदा सबैभन्दा पहिले हातखुट्टा राम्ररी धुनुपर्छ । अन्यथा उनीहरुको हातखुट्टामा टासिएको धुलोमाटोका कण तथा भाइरस स्वास नली वा मुखसम्म सजिलै पुग्ने गर्छ ।
आस्थमाका विरामीले जाडोमा न्यानो कपडा लगाउनु पर्छ । एसी वा संदाको मुनी बस्नु हुँदैन । इन्हेलर तथा औषधीको प्रयोग चिकित्सकको सल्लाह अनुसार नै सेवन गर्नुपर्छ । र, शरीरलाई जति सकिन्छ, त्यति नै धेरै न्यानो राख्नुपर्छ ।
आगोबाट टाढा रहने
जाडोमा आगो ताप्नुको मज्जा नै बेग्लै हुन्छ । आगोको रापले शरीरलाई न्यानो बनाउँछ । तर आस्थमाका विरामीका लागि आगोमा बस्नु हानीकारक हुनसक्छ । किनकी यसले स्वास्थ्यमा पार्ने असर कुनै सुर्ती पदार्थको सेवन भन्दा कुनै हालतमा पनि कम नभएको विशेषज्ञहरु बताउँछन् । भन्छन्, आखिर धुवाँ भनेको धुवाँ नै हो । चाहे त्यो आगोको होस् वा सुर्तीको । यसले आस्थमाको विरामीको स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पार्न सक्छ ।
खानपानमा विशेष ध्यान
चिसोमा आस्थमाका विरामीले खानपानमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । तातो तरल पदार्थको सेवन धेरै गर्नुपर्छ । सकेसम्म घरमै बनाएको कम वोसोयुक्त खानेकुरा खानुपर्छ । खानामा ताजा फलफुल तथा हरियो साजसब्जी धेरै खानुपर्छ । अमिलो वा कागती खानाले आस्थमाको समस्या बढ्दैन । तर कसैलाई अमिलोको एलर्जी छ भने त्यस्ता व्यक्तिले चिसोमा अमिलो सेवन नगर्नु नै उचित हुन्छ ।
घाम लागेपछि घरबाट बाहिर निस्कने
बदलिदो मौसम तथा प्रदुषणमा आस्थमाको विरामीले स्वास्थ्यको विशेष ध्यान राख्नुपर्छ । त्यसको लागि घरबाट निस्कदा मास्कको प्रयोग गर्नुपर्छ । विहानको मर्निङ्ग वाक पनि घाम लागेपछि मात्र गर्नुपर्छ किनकी प्रदुषणका कारण रातको समयमा वाुमा जम्मा भएको धुवा विहानीपख स्मोग (तुवालो)मा परिणत हुन्छ । चिसोमा यो समस्या सामान्य भएकोले आस्थमाका विरामीले घाम लागेपछि मात्र बाहिर निस्कनु पर्छ ।
राती सुत्नु अघि स्टिम लिएमा फोक्सोमा जमेको दिनभरको फोहर बाहिर निस्कने गर्छ ।
बच्चा नयाँ साथीहरुसँग घुलमिल गर्दैनन् ? जानी राख्नुहोस् यो एउटा समस्या हो
तलब नपाएपछि शिक्षक आन्दोलनमा उत्रिए, पठनपाठन प्रभावित
जीप दुर्घटनामा परी सात महिलासहित ११ जनाको मृत्यु